मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको हिसाबकिताब गडबड, बालुवाटारसम्मै अर्काे त्रास ! - Media Dabali
राजीनामा बुझाउन एमालेका २२ सांसदको हस्ताक्षर, केपी ओलीविरुद्ध ठूलो विद्रोह !
शनिवार, बैशाख ४ २०७८
काठमाडौं – नेकपा एमालेभित्र विवाद चर्किएर अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता माधवकुमार नेपाल लगायतलाई निलम्बन गरेपछि एकअर्कालाई सिध्याउने खेल चलिरहेको छ । कर्णाली प्रदेशमा अर्काे पार्टीका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर एमाले सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि भित्रि खेल छताछुल्ल भएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरण फेरबदलका लागि एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले राखेको विश्वासको मत लिने प्रस्तावलाई एमालेकै ४ जना सांसदले पास गराइदिए । फलतः विश्वासको मत पाएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाएको छ भने कर्णालीमा एमालेको मुख्यमन्त्री बनाउने योजना असफल भएको छ ।
केन्द्रमा अध्यक्ष ओलीले नेताहरूलाई निलम्बन गरेको हिसाबकिताब कर्णालीमा चुक्ता गरिएपछि एमालेभित्रको हिसाबकिताब सबैतिर गडबड भएको छ । कर्णालीपछि अब लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल गडबड हिसाबको शिकार हुने आकलन गरिएको छ ।
एमालेभित्र नेता नेपाल पक्षका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले कर्णालीको कदमलाई संकेत मात्रै भनेर बताउनुले अन्य प्रदेशमा समेत फ्लोर क्रस हुनसक्ने आकलन भइरहेको छ । नेता ज्ञवाली लुम्बिनीकै नेता हुन् ।
कर्णालीको धक्का छिमेकी प्रदेश लुम्बिनीमा समेत देखिएर ४१ मतसहित संसदमा अल्पमतमा देखिएका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध प्रकट हुने देखिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरिरहेका छन् ।
कूल ४२ मतसहित अविश्वासको प्रस्तावका लागि तयारी भइरहेको लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई पदमुक्त गर्नका लागि बाँकी १ भोटको आवश्यकता परेको छ । कांग्रेसको १९, माओवादी केन्द्रका १७, जसपाका ५ र राजमोका १ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध जाने रणनीति बनाएका छन् । जसपाको अनिर्णित १ मत अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा नआए एमालेको खनाल–नेपाल पक्षको फ्लोर क्रस आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
कर्णालीको घटनाले प्रदेशमा पनि सत्ता फेरबदलका लागि सहज भएको एमाले खनाल–नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य मेटमणी चौधरीले बताए । ‘कर्णालीबाट सुरू भएको फ्लोर क्रस अब देशैभर जाने हो, यो कर्णाली प्रदेशमा मात्रै गरिएको चिज होइन,’ चौधरीले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशको हकमा पनि हामीहरू मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत पुर्‍याउनका लागि आवश्यक मत क्रस गरेरै जान्छौं ।’
यसरी लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री पोखरेलको हिसाबकिताब गडबड हुने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नजिकका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री पोखरेलको पद संकटमा परेपछि बालुवाटारसम्मै त्रास फैलिएको छ । यसअघि ओलीकै विश्वासपात्र तथा कर्णालीका नेता यामलाल कँडेल आफ्नो योजनामा सफल भइसकेका छन् ।